Global Voices teny Malagasy · Oktobra 2008
Tantara misongadina tamin'ny Oktobra 2008
Na dia voizina mafy indray aza amin’izao fotoana ny momba an’i Afganistana amin’ny fampahalalam-baovao any Etazonia, dia isan’izay raharaha goavana saro-bahàna ho an’ny firenena izy ity. Na tsy hiresaka izay hitan’i Azar Balkhi ho fahalemen’ny ‘Vondrona miara-dia’ mba hifehy ny fifanenjehana ara-poko ka niantsoany fanafihana an’habakabaka aza. Resaka tsy azo...
Madagasikara : Manahy izay mety ho fiantraikan'ny krizy Ekônômika ireo mpiblaogy
Raha tsy mitsaha-mitombo ny krizy, ireo kandida ho filoham-pirenena Amerikana roa lahy, ireo mpitondra Erôpeana sy lohandohany amin'ireo fikambanana iraisam-pirenena dia samy manambara fa voatery ahena ireo fanampiana iraisam-pirenena. Ireo firenena an-dalam-pandrosoana toa an'i Madagasikara izay mbola mianki-doha fatratra amin'ny fanampiana iraisam-pirenena dia manahy mafy satria manambana ireo ezaka izay...
Brezila: nigadra fa naneho hevitra tamin'ny blaogy (bolongana)
Manamboninahitra ambony ao amin’ny polisy no olona voalohany nampidirina am-ponja noho ny fanehoan-kevitra tamin’ny bolongana tany Brezila. Indreto ary torotoro ravina teo amin’ny tontolom-bolongan’ny polisy avy amin’izany fisehoan-javatra izany. Tsy atao mahagaga loatra, noho ny torolalana amin’ny fampianarana mamahana bolongana sy maneho hevitra (miafina sy tsy fantatra toerana ipetrahana), raha...
Afganistana24 Oktobra 2008
Amerika Avaratra18 Oktobra 2008
Amerika Latina16 Oktobra 2008
Tantara tamin'ny Oktobra, 2008